Inona no ho hita any Shina | Vaovao momba ny dia
Maria | | Shina, Fitsangatsanganana any Azia
Amin'ny maha firenena fahatelo lehibe indrindra an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny habaka voajanahary mahatalanjona, kolontsaina ary tanàna mampifangaro ny fomban-drazana amin'ny avant-garde, dia tsy mahagaga raha China dia iray amin'ireo firenena be mpitsidika indrindra amin'ny Farany Atsinanana. Fa inona avy ireo toerana hita any Shina izay tsy tokony ho tarainao? Mamoaha taratasy sy penina dia holazainay aminao izany!
Ny renivohitra dia iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary koa iray amin'ireo mahaliana indrindra eto amin'ny kaontinanta. Ny tantarany dia nanomboka tamin'ny taona 1000 farafahakeliny talohan'i JK ary ankehitriny dia manana mponina mihoatra ny 22 tapitrisa izy. Raha mieritreritra ny handeha ho any Shina ianao dia tsy maintsy misy i Beijing, iray amin'ireo toerana tena ilaina amin'ny lalanao.
Ny fifangaroan'ny maoderina sy ny fomban-drazana dia sarotra miharo raha tsy tsapanao izany ary afaka mahita tranobe mahaliana toa ny Temple of Heaven na ny Forbidden City ianao, toerana misy tantara toa ny Tiananmen Square na ny Mao Zedong Mausoleum ary koa ny trano fisakafoanana trano fisakafoanana, fivarotana ary trano fisakafoanana avant-garde.
Any amin'ny sisin'ny Beijing dia misy toerana tena mahaliana ihany koa hita any Shina toy ny Great Wall, ny Summer Palace ary ny Kunming Lake na ny fasan'ny tarana-mpanjaka Ming.
Na dia afaka mandany herinandro farafahakeliny ao an-tanàna aza ianao, ny telo andro no fotoana kely indrindra hankafizana ireo zava-manintona lehibe.
Chengdu no renivohitry ny faritanin'i Sichuan ary tanàna misy ny lovia matsiro indrindra any Chine, ka izany no antony nantsoin'ny UNESCO ho gastronomic. Ny zava-manitra nentim-paharazana dia dipoavatra mena ary tena mahazatra ny mampiasa dipoavatra mainty Sichuan mba hanaovana ny lovia kintana amin'ny sakafo ao an-toerana: ny vilany mafana, miorina amin'ny hena, legioma ary trondro.
Ary koa, Chengdu no toerana nahaterahan'ny panda. Misy ivon-toerana fitehirizana marobe izay iainana panda maro dia maro amin'ny fahalalahana voahodidina volotsangana. Tamin'ny andro taloha, ny panda dia nampiasaina ho fitaovana ara-diplomatika ary na dia fiadiana ady aza. Androany dia tandindon'i Sina ny panda.
Etsy ankilany, amin'ity tanàna ity ianao dia afaka mahita ny vato lehibe indrindra naorin'i Buddha hatrizay: ny Buddha Leshan. Mirefy 71 metatra ny haavon'ny 28 avo. Ny fananganana azy dia nanomboka tamin'ny taona 713 ary tafiditra tao amin'ny UNESCO World Heritage Site hatramin'ny 1996. Maneho ny fanantenana sy ny fanambinana.
Ny iray amin'ireo dingana amin'ny dia mamaky an'i Chine dia i Xian, fonenan'ny mpiady terracotta fanta-daza. Tamin'ny 1974, sendra nahita tantsaha ny miaramila voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'ny taona faha-XNUMX talohan'ny taona BC niambina ny fasan'ny amperora voalohany an'i China niaraka tamina soavaly sy kalesy. Na dia sarotra inoana aza izany dia tsy misy tarehy roa mitovy amin'ireo mpiadin'i Xian.
Ny tena izy dia ao Xian no ahitanao ny sinoa nentim-paharazana indrindra amin'ny rindriny sy ny tilikambo Bell and Drum. Manana tanàna miozolomana mahaliana koa izy ireo.
Ao amin'ny faritry ny renirano Yangtze angano, misy ny iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra eto an-tany: Shanghai, izay lasa tandindon'ny tanàna cosmopolitan amin'ny fandrosoana ara-teknolojia sy ara-toekarena ao Shina.
Shanghai dia manana hatsarana voajanahary vokatr'io fifangaroana io eo amin'ny maoderina sy ny nentim-paharazana, satria misy ny manodidina izay mifantoka amin'ny tranobe mirakitra tranobe ary ny hafa izay mitondra antsika any Sina nentim-paharazana.
Bund no faritra misy trano hatramin'ny vanim-potoana fanjanahantany niaraka tamin'ny fomba eropeana izay manasa anao handeha an-tongotra lavitra amin'ny moron'ny Huangpu ary Pudong no distrika ara-bola any Shanghai, izay natsangana nandritra ny roapolo taona lasa izay nisy fijery futuristic be tokoa.
Toerana mahaliana hafa hita any Sina mandritra ny fitsidihany an'i Shanghai dia ny Quartre frantsay, ny tsenan'i Jiashian na ny Old City, ilay tanàna tranainy efa 600 taona mahery ny tantarany.
Hong Kong dia iray amin'ireo tanàna mahavariana sy maoderina indrindra eto an-tany izay feno fifanoherana. Avy ao amin'ny Avenue of Stars dia azonao jerena ireo trano ambony mitaingina trano manjelanjelatra amin'ny alàlan'ny fampisehoana jiro isan'andro amin'ny 20:00 alina ary tsy maintsy any Hong Kong ny fiakarana ny tampon'ny Victoria, ilay tendrombohitra avo indrindra ao an-tanàna, amin'ny alina. Mitsitsia andro vitsivitsy amin'ny fijanonanao hahitanao ny sakafo Cantonese, fety ary fitsidihana ireo tohatra lava indrindra eto an-tany, ny escalators afovoany afovoany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Inona no ho hita any Shina